Fetin'ny tsingerintaona nahaterahan ny birao fizahantany afrikanina miaraka amin'i Aloha
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Fetin'ny tsingerintaona nahaterahan ny birao fizahantany afrikanina miaraka amin'i Aloha
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube
Rahampitso, ny Birao fizahantany afrikanina (ATB) dia mankalaza ny tsingerin-taonany roa aorian'ny fandefasana malefaka mandritra ny World Travel Market (WTM) 2018 any London miaraka amin'ny ho avy manome fanantenana hamolavola ny marketing any Afrika alohan'ny sarintany fizahan-tany eran'izao tontolo izao. Misy fifandraisana mahery any Londres - Hawaii, tsy hoe satria i Sierra Leone no jerena Hawaii of Africa.
Nanomboka iray volana talohan'izay izy rehetra niaraka tamin'ny hevitra sy tranokala www.africantourismboard.com . Ny tranokala dia natsangan'i eTurboNews amin'ny maha sehatra ara-barotra azy, ary ny hevitra dia avy eTurboNews Mpamoaka Juergen Steinmetz.
Steinmetz, izay sady filohan'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP) Nifampidinika tamin'ny mpiara-miasa aminy Profesora Geoffrey Lipman, filohan'ny fikambanana ary madethe Africa Tourism Board izay tetikasa eo ambanin'ny elo ICTP miaraka amin'ny tanjona dia ny hampiroborobo ny dia an-tsitrapo any Afrika.
Iray volana taty aoriana ary taorian'ny fifampidinihana tamin'ny mpitarika indostrialy izay nahitana an'i Alain St. Ange, ny minisitry ny fizahan-tany teo aloha avy any Seychelles; Walter Mzembi; ary Dr. Taleb Rifai, Carol Weaving of Reed Exhibitions dia tia an'io hevitra io ary nanolotra efitrano fiderana ao amin'ny World Travel Market any London ho fanombohana malefaka ATB.
Ny fandefasana moramora ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia natao ny alatsinainy 5 novambra 2018, nandritra ny World Travel Market tany London tany Excel izay nandraisan'ny vahiny nasaina, ny olona manan-katao ary ny olo-manan-kaja avy amin'ny fikambanana mpizahatany eran-tany ny lampihazo hananganana ny Birao.
Nasaina ireo mpandray anjara tsy miankina, VIP, tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ary ny haino aman-jery ary koa ireo olona manandanja izay nahita ny fandefan'ny ATB malefaka tany Londres.
Notohanan'i Reed Expo, mpikarakara ny WTM, ny hetsika dia nahita ny fahaterahan'ny ATB izay ny asany dia ny hitondra ny kaontinanta afrikanina ho amin'ny sarintany fizahan-tany eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny iraka hoe "Aiza no hahatongavan'i Afrika ho iray tanjona."
Nandritra ny hetsika tany London, dia nanao fanambarana ny mpiaro ny ATB sy ny loholona amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Birao any Cape Town, Afrika Atsimo, ny volana aprily taona 2019, nandritra ny WTM Africa.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia nijoro ho toy ny fikambanana iray izay ankatoavin'ny sehatra iraisam-pirenena ho mpiorina amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ny faritra afrikanina.
Ny Fikambanana dia manome fanentanana mifanaraka, fikarohana lalina ary hetsika vaovao ho an'ireo mpikambana ao aminy manerana an'i Afrika sy ireo izay any ivelan'i Afrika miaraka am-pitiavana ny fampandrosoana ny fizahantany any Afrika.
Ny mpitantana ny fizahan-tany sy ny olona manandanja izay nandray anjara tamin'ny fanentanana malefaka ATB tany London dia ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha; Carol Weaving, mpitantana ny fampirantiana oReed Exhibitions; Prof. Geoffrey Lipman avy amin'ny SunX ary filohan'ny International Coalition of Tourism Partners (ICTP); ary Alain St. Ange, minisitry ny fizahantany tany Seychelles teo aloha.
Ny mpitantana hafa izay niresaka nandritra ny hetsika tany Londres notarihin'i Juergen Steinmetz dia i Graham Cooke, filoha sady mpanorina ny World Travel Awards, ary Tony Smith avy amin'ny I Free Group, Hong Kong.
Ny minisitry ny fizahantany afrikanina sy ny lehiben'ny birao fizahantany avy any Maurice, Sierra Leone, Seychelles, Cape Verde, Uganda, ary ny minisitra teo aloha avy any Zimbabwe dia nahatsikaritra ihany koa ny fandefasana ATB malefaka tany London.
Nilaza ny filohan'ny ICTP, Juergen Steinmetz, nandritra ny hetsika fa mila feo iray i Afrika hampiroboroboana ireo mpizahatany manankarena amin'ireo tsena fizahan-tany manerantany.
"Nisy fahalianana lehibe tamin'ity tetikasa ity, izay nanasongadina ny filàna hampiroborobo ny fizahantany any Afrika," hoy izy.
"Mila ny feony manokana i Afrika amin'ny indostria manerantany miaraka amin'ny firenena 54, ary kolontsaina maro hafa maro hafa, mbola kaontinanta mila hitan'ny maro izy," hoy i Steinmetz tamin'ny mpanatrika.
"Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia momba ny fandraharahana, ny fampiasam-bola ary ny fampandrosoana - ny fampitambarana an'i Afrika," hoy izy.
Nilaza ny filoham-pirenena Graham Cooke, filoham-pirenena momba ny dia lavitra: “Ny zavatra iainako amin'i Afrika dia ny tsy fahampian'ny fahalalana manerantany momba ny kaontinanta, noho izany, tena ilaina ny fanabeazana.
“Misy famoronana mamorona eto Afrika ary mila maheno izany ny olona. Tokony hamidy ny tenany ho kaontinanta tokana i Afrika; tokony hiaraka ny olona ary hanolotra hafatra tokana, ”hoy i Cooke nanampy.
Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo mpikambana amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia hanome fitarihana sy torohevitra amin'ny lafiny iray sy iraisan'ny mpikambana ao aminy.
Steinmetz koa dia niresaka momba ny fizotran'ny fampodiana ny Birao Fizahan-tany any Afrika hody any Afrika ary hananganana tamba-jotra manerantany hampiroborobo ny kaontinanta ho toeram-pizahan-tany azo antoka sy mendrika indrindra ary madio indrindra eto an-tany
Ny tanjon'ny Birao fizahantany afrikanina dia ny hanana mpikambana isaky ny fanjakana afrikanina amin'ny fananganana tambajotra tsy manam-paharoa manerana ny kaontinanta, hoy izy.
"Hanolotra tetik'asa ho an'ny orinasa izahay, azon'ireo mpikambana ahafahan'izy ireo misoratra anarana araka izay hitany," hoy i Steinmetz nanampy. Ny fandraisana andraikitra voalohany avy amin'ny Birao dia misy ny tombontsoa ho an'ny fampiasam-bola, fahitana, fiarovana, fiarovana ary fifandraisana, ankoatry ny hafa.
Taorian'ny famoahana malefaka ny fandaminana vaovao dia nandeha nanjono i Steinmetz eTurboNews tambajotra hisarihana tobim-pandraisana mpikambana lehibe sy mpilatsaka hofidina hitondra ATB amin'ny dingana manaraka.
Ny fanombohana ofisialy dia nambara ho an'ny World Travel Market any Capetown ny volana aprily 2019. Tany Capetown, i Steinmetz dia nanakarama an'i Doris Woerfel, Alemanina iray monina any Afrika Atsimo mba hametraka ny ankamantatra ho toy ny CEO. Ny filoha voalohany dia Cuthbert Ncube, niaraka tamin'ny filoha Alain St. Ange, ary ny lehiben'ny filaminana Dr. Peter Tarlow.
Birao mpanatanteraka fantatra amin'ny anarana hoe EXCO dia niforona niaraka tamin'i Ncube, Woerfel, ary Steinmetz ary taty aoriana Simba Mandinyenya, mpanatanteraka teo aloha RETOSA izay nasaina hitondra ATB amin'ny ambaratonga manaraka.
Herintaona taorian'ny fanombohana voalohany tao amin'ny WTM 2018, nambara tamin'ny WTM 2019 ny ONG, ary ity no dingana faharoa hitondrana ny Birao Fizahan-tany Afrikanina avy any Hawaii mankany Pretoria, Afrika Atsimo.
Taorian'ny nitondran'ny COVID-19 an'izao tontolo izao dia namorona ny Project Hope ny Birao fizahantany afrikanina izay notarihin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai.
Rahampitso 5 Novambra 2020 no fitsingerenan'ny andro nahaterahana faharoa an'ny ATB. Hetsika virtoaly iray misy mpikambana sy namana an-jatony hanatrika izany ary mandritra izany dia hampahatsiahy ny mpanatrika ny fijeriny i Steinmetz hanangana ATB ho fikambanana tena afrikanina miaraka amin'ny fitarihana afrikanina ho an'i Afrika. Steinmetz koa dia hampahatsiahy ireo mpikambana izay niditra tao amin'ny ATB fony mbola tetik'asa tany Hawaii izy io, fa ny fomba fitadiavam-bola dia tsy tokony hatao ambanin-javatra. “Mety hahomby ianao raha manam-bola handoavana ny olona amin'ny asany tsara. Tena marina ho an'ny marketing sy ny fahitana izany. ”
Steinmetz dia hampahatsiahy ihany koa ny mpijery ny fahitany izay efa nanana ny birao Afrikana fizahan-tany afrikanina eo ambany fitarihan'i Afrika sy ho an'i Afrika. “Efa ho eo isika. Ny ATB dia manana ekipa lehibe eraky ny kaontinanta manana mpitarika entanina te hanana fanovana ho an'ny fizahantany afrikanina. Tsy tokony hanandrana mijanona na mifehy loatra ny fandraisana andraikitra isam-paritra toa izany isika, ary tokony hanohana izay rehetra te hanana fiatraikany tsara amin'ny indostrian'ny fizahantany any Afrika. Tsy misy maharatsy ny orinasa mpikambana iray raha te-hahazo tombony koa - ny mifanohitra amin'izay no izy - ary tsy maintsy manohana an'io isika.
“Fotoana izao hisian'ny Filankevitra mpanatanteraka mihemotra ary tsy hanaiky afa-tsy ireo mpitondra monina any Afrika ary manana zom-pirenena miaraka amin'ny firenena afrikanina.
“Ny ankamaroantsika tsy Afrikana te hanampy ny fizahantany afrikanina dia tokony hamorona vondrona mpanolotsaina birao mpanatanteraka, fa ny filan-kevitra mpanatanteraka kosa dia tokony hitarika ny afrikanina sy ho an'ny afrikanina. Zava-dehibe ihany koa ny tokony hanaovan'ny CEO iray tatitra amin'ny birao ary tsy tokony ho anisan'ny Filan-kevitra mpanatanteraka. Mety hanjary fifandirana mahaliana tokoa izany. Ny asan'ny CEO dia manan-danja tokoa amin'ny fikambananay ary tsy azo ifanoherana.
“Fotoana izao handraisan'ny mpikambana ao amintsika hevitra ihany koa. Tsy mbola nanao fivoriana ankapobeny izahay, ary tsy nifampiresaka tamin'ny mpikambana mihitsy. Ny lalàm-panorenantsika dia tokony hiseho amin'ny fomba demokratika kokoa kokoa satria nanapa-kevitra ny handeha amin'ny lalana tsy mitady tombontsoa izahay, "hoy i Steinmetz nanampy.
Mazava ho azy fa ny eritreritr'i Steinmetz ary noho ny antony tsy ankalazana ity fitsingerenan'ny andro nahaterahana ity dia voatsikera noho ny a Fanonganam-panjakana tamin'ny famoahana ho an'ny fikambanana WhatsApp vondrona nataon'ny mpikambana EXCO. "Ny fitsikerana dia tsara ary fomba iray mandroso hampandroso ny fikambanana," hoy i Steinmetz. "Tsy coupd'Etat ity, fa fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny fikambanana iray izay napetrakay betsaka ary te handroso."
Na izany aza, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana virtoaly rahampitso dia hitondra valiny amin'ireo efa tafiditra hatramin'ny voalohany. eTurboNews dia hanome vola $ 10,000, 2,500 $, ary $ 1,000 ho an'ny marketing homena ireo orinasa afrikanina telo tsara vintana nanatrika ny hetsika.
Misokatra hatramin'ny 7:00 hariva ny fisoratana anarana amin'ny 5 Novambra, izay manomboka ny fety fanamoriana. kitiho eto misoratra anarana na mankany www.africantourismboard.com/birthday Raha mila fanazavana fanampiny.
Hong Kong-Singapore Bubble Fahafenoana ny fangatahana dia lavitra momba ny fitsangatsanganana
Miaraka amin'ny tranga 30K COVID-19 vaovao ao anatin'ny iray andro dia nanambara ny fanidiana vaovao i Italia